ဗန္ဓုလကျတော့ အောက်မြန်မာပြည်ရ.. ကနောင်ကျတော့ အထက်မြန်မာပြည်ရ...
မွတ်တွေ က မြန်မာပြည်သိမ်းတော့မှာ....တဲ့...
စိစစ်အရေးယူရန်မှာ ၉၆၉ တာဝန်မဟုတ်။အစိုးရတာဝန်သာဖြစ်သည်။)
မူဆလင်နဲ့ယူသူဟာ မူဆလင်ဘာသာကိုမပြောင်းရင် ဒီအိမ်ထောင်ရေးဟာ မူဆလင်ဘာသာအယူအရ တရားမဝင်ဘူး။ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာလည်း မူဆလင်ဘာသာကိုဘဲဝင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အစ်စလမ်ဥပဒေ ရှိတယ်။ သူတို့ကဒီ ဥပဒေကို ဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ရိုမင်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာမှာလည်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ လက်ထပ်ရမယ်၊ သူတို့ဘာသာကိုဘဲဝင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀ ရာစု အလယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီး ဘာသာကိုဘဲဝင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ကိုမျက်စိမှိတ်၊ရေငုံ ထားတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန် လက်ထပ်ရင် ပြဿနာကြီးဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။
အခုဦးဝီရသူတို့လုပ်ချင်တာက အဆိုမူကြမ်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ် တင်ဖို့အဆင့်ရောက်ဖို့တောင်မရှိသေးပါဘူး။ ရောက်ရင်တောင်မှလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ တခြားဘာသာတွေကလုပ်ထားတာ အနှစ်တတောင်ကျော်နေပါပြီ။ လူ့အခွင့်အရေး ဦးစားပေးလိုသူတွေဘာကြောင့် မျက်စိမှိတ်၊ရေငုံ ထားကြပါသလဲ။
ဒါမျိုးနဲ့ဆင်တူယိုးမှားဥပဒေတွေထုတ်ဖို့ YMBA ခေတ်၊ GCBA ခေတ်၊ ဝံသာနုခေတ်၊ ဒို့ဗမာတို့၊ ဆင်းရဲသားတို့၊ မျိုးချစ်တို့ခေတ် တွေမှာလည်း လုပ်ခဲ့ကြပြီး "the Buddhist women's Special Marriage and Succession Act, Burma Act of 1939, ဟာ ၁၉၄၀ ခု ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ကစပြီး တရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
မူဆလင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဟာ ကလေးမွေးဖို့ချည်းဘဲလား။ ယောက်ျားတွေက သဘာဝအလျောက် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ရတော့ ကြိုက်သလောက်မယားယူကြစေ၊ ကာမအရသာခံစားကြပါစေ၊ မိန်းမဖြစ်လာတာ အလ္လာအရှင်က နင်တို့ကိုယောက်ျား တွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်လိုက်နေရပြီး ဗိုက်ကြီးဖို့ ကလေးမွေးဖို့၊ ချက်ပြုတ်ကျွေး ကျွန်ခံရဖို့ဘဲ ဖန်ဆင်းထားတာလား။
Pl wear full Muslin dress .Very ugly to see when U shouted with wearing Myanmar Traditional dress.
We, Myanmar don't accept you as Myanamr. Please don't wear Myanmar dress, better you should wear full Muslin dress and shout as you like. Shameful !